Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Gunyana 19, 2017
Chirongwa chekunyoresa pachishandiswa mishina yechizvino zvino, yeBiometric Voter Registration kits choburitsa kusagadzirira kwakakwana kweZimbabwe Electoral Commission kuMasvingo sezvo nzvimbo dzekunyoresa dziri kushaikwa mumishina iyi.
Nyaya yakakwidzwa kumatare neMDC-T ichiti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakakanganisa pavakatara mazuva echirongwa che BVR yonzwikwa mudare mangwana.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, votaura kekutanga nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly, uyo uri kupindwawo nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, avo vakasvika mu New York nemusi weSvondo.
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa naVaChris Mutsvangwa roendesa gurukota revakarwa muhondo kumutare richiti vari kushandiswa neZanu PF kuti vaumbe sangano revakarwa muhondo rinorerekera kumutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzozeya zviri kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange uyo unonzi uri kuita zvakanaka chose panguva iyo vanhu vari kunetseka zvikuru kuti vatore mari dzavo kumabhanga.
Vamwe vagari vekuDzivaresekwa3 vogara vakabatira ura mumaoko vachitya kudzingwa mundzimba dzavagere dzekanzuru sezvo vari kutadza kubhadhara mari kukanzuru yeHarare.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa vechidiki vari kupinda muchirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa mishina mitsva yeBiometric Voter Registration.